मकवानपुर/ राप्रपा मकवानपुरका जिल्ला सदस्य एवम् राष्ट्रिय प्रजातान्त्रीक युवक संगठनका जिल्ला अध्यक्ष अर्जुन ढुंगाना पार्टीबाट निलम्बीत भएका छन् । राप्रपाको आज बसेको कार्यसमितिको बैठकले उनलाई ६ महिनासम्म साधारण सदस्य समेत नरहने गरी निलम्बन गरिएको राप्रपा मकवानपुरका जिलला अध्यक्ष रामहरी न्यौपानेले बताए । पार्टी भित्र भएको...
बैशाख १४ गते क्रान्तिकारी पत्रकार संगठनको दोस्रो अधिवेशन हुने
मकवानपुर/ क्रान्तिकारी पत्रकार संगठन मकवानपुरको दोस्रो अधिवेशन यहि बैशाख १४ गते विहिबार हुने भएको छ । हेटौडामा बसेको संगठनको बैठकले अधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको हो । अधिवेशनबाट नयां कार्यसमिती चयन गर्नेछ । बैठकमा श्रमजिवि पत्रकारलाई संगठनमा आवद्ध गर्ने तथा सुद्धिकरणमार्फत क्रियाशिल बनाई सशक्त टिम बनाउने संगठनले जानकारी दिएको छ ।...
हेटौँडा ५ मा एमालेको वडा भेला सम्पन्न
मकवानपुर/ नेकपा एमाले ५ नं वडा कमिटिले आसन्न स्थानीय चुनावलाई थप ब्यवस्थित गर्न र उम्वेदवारहरुको नाम सिफारिस पूर्वतयारीका निम्ति आज व्यापक जनसहभागिता का बीच वडा भेला सम्पन्न गरेको छ । वडाअध्यक्ष पदम् बहादुर बजगाईको अध्यक्षता तथा ५ नं वडा निर्वाचन उम्वेद्वार नाम सिफारिस सहजकर्ता अर्जुन ढुङ्गेलको प्रमुख आतिथ्यतामा भेला...
अटो र विद्युतीय रिक्साको मनपरी !
मकवानपुर/ हेटौंडा सानोपोखराबाट पिप्लेचोकसम्म जाँनका लागि सार्वजनिक सवारी साधनले यात्रुसंग साधारणतया कति भाडा लिन्छ होला ? १५,२० अलि बढी लिए २५ रुपिया तपाईंको सोचाई यस्तै हुनसक्ला । तर सानोपोखरादेखि पिप्लेचोकसम्म जाँनका लागि १ सय ५० सय रुपिया भाडा माग्ने सार्वजनिक सवारी साधनलाई तपाईं के भन्नुहुन्छ ? अचम्म मान्नुपदैन,अहिले हेटौंडामा...
गाउँगाउँमा अब भूकम्प प्रतिरोधी घर !
मकवानपुर, वेष्र्टन डभलपमेन्ट बैंक र नमस्ते वित्तीय संस्था एक आपसमा मर्जरमा जान लागेका छन् । नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा जारी सुचना अनुसार यही कारण वेष्र्टन डेभलपमेन्ट र नमस्तेको सेयर कारोबार आइतबारबाट रोक्का गरिएको छ । दोस्रो त्रैमाशसम्ममा नमस्तेको चुक्ता पुँजी ४ करोड ६५ लाख रुपैयाँ र वेष्र्टनको ३१ करोड ३८ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।...
एमालेको बाफलमा टोल निर्वाचन कमिटि गठन
हेटौँडा नेकपा एमाले बकैयाँ गाउँपालिका अन्र्तगत बकैया वडा नंबर १ बाफलमा निर्वाचन टोल कमिटि निर्माण भएको छ । एमाले बकैयाँ गाउपालिका सदस्य बुद्धबहादुर लोप्चनको प्रमुख आतिथ्यतामा भएको भेलाले लेखत मुक्तानको अध्यक्षतामा ३५ सदस्यीय टोल निर्वाचन परिचालन कमिटि निर्माण गरेको छ । कमिटिको सहसंयोजकमा सुसिता घिसिङ तथा सचिवमा तिर्थबहादुर घिसिङ...
भ्यागुते रोगबाट पाल्पामा एक बालकको मृत्यु
पाल्पा भ्यागुते रोगबाट पाल्पामा एक बालकको ज्यान गएको छ । उपचारको क्रममा पूर्वखोला गाउँपालिका–२ जल्पाका ९ वर्षका कमल थापाको सोमबार राति ज्यान गएको लुम्बिनी मेडिकल कलेज प्रभासले जनाएको छ । कमलको गएको १२ दिनदेखि उपचार भइरहेको थियो । पाल्पामा पहिलो पटक भ्यागुते रोग देखिएको हो । सरुवा रोग भएकाले मृतकका परिवार र गाउँका एक सय भन्दा बढीलाई...